China Exmers Vertical Butter Exporters sy Company | ETEX
Blinds menaka no varavarankely mahazatra indrindra manarona ny vokatra. Ny asany miaraka amin'ny fanamorana maivana sy fanitsiana. Miorina amin'ny karazan-damba vita amin'ny lamba volon-doha, Vertical Blind no safidy sy be indrindra hampifanaraka ny filanao.
Ambany: 89/100 / 127mm Vane
Drafitra vita amin'ny lamba: Plain, Jacquard, Blackout, FR.
Aluminum: Narrow, Square, High, ambany track
Ny jamba mitsangana mijoro dia mamarana efitrano iray. Manampy amin'ny fitazonana ny fiainana manokana izy ireo, mifehy ny hafanana ary manakana ny hazavana mamirapiratra tsy hiditra amin'ny efitrano. Raha ny marina, ny jamba mena mainty dia mety tsara amin'ny efitrano fandraisam-bahiny izay mety hifohazan'ny masoandro mafana ny maraina, na ajanony ny zaza matory amin'ny alina.
Ny jamba menaka dia fomba tsara hamonjy fitoerana sy mamorona tsipika madio sy maoderina amin'ny efitrano rehetra. Ny jamba mijoko miakatra dia tonga amin'ny feon-javamaneno isan-karazany mba hifangaro tsy misy fotony amin'ny haingoo anatiny ary manampy fahatongavany vita eo amin'ny varavarankelinao. Ny jamba mena volo dia tena malaza ankehitriny, toy ny jamba mitsangana fotsy. Ireo loko tsy mitanila ireo dia mandeha tsara amin'ny toe-javatra rehetra ary amin'ny fomba voaravaka firavaka.
Mety ho an'ireo karazana fikandrana isankarazany, avy eo amin'ny varavarankely mahazatra mankany amin'ny varavaran'ny paty sy ny varavarankely frantsay, ny jamba miankohoka mioritsoritra dia mivoaka amin'ny sakelika isan-karazany sy manidina. Na ho an'ny conservatory anao, na mitady jamba mitsangana nitazona varavarankely am-baravarankely ianao, azonao antoka ny hahita izay ilainao ao amin'ny Dunelm. Izahay koa dia mametraka jamba marobe amin'ny endriny isan-karazany. Ny jamba vita amin'ny menaka vita amin'ny lamba dia mety ho malaza indrindra amintsika, fa ny plastika, vy ary vy matevina ihany koa dia azo alaina.
● Mora hitazona:
Noforonina tamin'ny polyester ary azo alaina amin'ny loko isan-karazany - ao anatin'izany ny fotsy, ny crème ary ny volo fotsy ny jamba miorim-paka. Alefaso fotsiny ny sponjy na kitapo madio amin'ny lamba malefaka mba hamerenany ny jiro mitsangana anao amin'ny tsara indrindra. Izany dia mahatonga azy ireo ho tsara toy ny jamba an-dakozia, izay mety ho famafana mora foana ny fiparitaka. Ny jamba vita amin'ny menaka vita amin'ny vy dia tena mafy sy ny fitazonana ambany.
● fiarovana aloha:
Ho an'ny tokantrano dia zava-dehibe ny mahatakatra fiarovana amin'ny jamba, indrindra amin'ny faritra ampiasain'ny ankizy kely. Ny manam-pahaizana momba ny fitafy lamba eo am-baravarankely dia afaka manoro hevitra momba ny jamba mety indrindra ho anao, ary manazava ny maha-zava-dehibe ny fitaovana fiarovana amin'ny tadina.
Raha mila fampahalalana misimisy momba ny fametrahana jamba miorim-paka ao an-tranonao, vakio ny torolàlana fiarovana an'ny jamba. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitafy varavarankely, azafady jereo ny toro-hevitra momba ny toro-hevitra arahinay. Zahao ny jiro miorim-paka aminay ary fantaro ny mety tsara ho an'ny tranonao.
● Fampiasana vinavina:
Blinds menaka Ampiasaina betsaka amin'ny Café, Sekoly, trano, trano arak'entana, fivarotana, trano fandraisam-bahiny, ny hopitaly ary ny toerana hafa rehetra amin'ny fanaovana pubic. Ireo jamba roller dia mampiasa anatiny na ivelany. Miorina amin'ny fisafidianana tsy misy farany fitaovana sy rafitra.
Previous: Blinds Venetian
Manaraka: Jamba Zaridaina vonona